कडा हुँदै लक डाउन! ८३ जना काभ्रे प्रवेश गर्न पाएनन, १९ जना अझै नियन्त्रणमा – Radio Roshi
कडा हुँदै लक डाउन! ८३ जना काभ्रे प्रवेश गर्न पाएनन, १९ जना अझै नियन्त्रणमा
in रोशी खबर — by Roshikhabar —	April 15, 2020
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले आजबाट पैदलयात्रीलाई समेत प्रवेश गर्न रोक लगाएपछि ८३ जना पैदल यात्री जताबाट आएका हुन त्यस तर्फ नै फर्काइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले काभ्रेको सिमाना साँगा र नेपालथोकबाट उनीहरु फकाईको छ । उहाँका अनुसार भक्तपुरबाट आएकालाई भक्तपुर तर्फ र सिन्धुलीबाट आएकालाई सिन्धुली तर्फ फकाईको छ ।
आज लड डाउन उल्लघंन गर्ने १९ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको एसपी रविकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार लक डाउन अटेर गरी आउने २९ सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको छ । जसमा मोटरसाइकल २३, स्कुटर ४ र कार २ वटा नियन्त्रणमा लिइएको छ ।